जापानी भाषा परीक्षाको फर्म खुल्यो’ – Life Nepali
जापानी भाषा परीक्षाको फर्म खुल्यो’
काठमाडौं । आगामी जुलाई ५ देखि संचालन हुन लागेको जापानी भाषाको परीक्षा जेएलपिटिको आवेदनफर्म खुलेको छ ।
उक्त परीक्षाको शुल्क अब खल्तीवालेट प्रयोग गरी अनलाईन मार्फत नै तिर्न सकिने भएको छ । खल्तीले जापान अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भाषा सिकाउने र पढाउने शिक्षकहरुको संस्था जापानिज भाषा शिक्षक संगठन नेपालसँग सहकार्य गरी परीक्षाको शुल्क अनलाईनबाटै तिर्न मिल्ने सुविधा ल्याएको हो ।
लेभल एन १ देखि एन ५ सम्मका फर्ममध्ये आफूलाई अनुकुल कुनै एक फर्म भर्न सकिनेछ । परीक्षाशुल्क तीन हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । जापानमा नेपाली युवाहरुको रोजाईमा रहेको एक आकर्षक शैक्षिक गन्तव्य हो । हरेकवर्ष उच्च शिक्षाका लागि दशौँ हजार विद्यार्थी जापान जाने गरेका छन् । उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने सबै विद्यार्थीले जापानी भाषा परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
विगतका वर्षहरुमा परीक्षा शुल्क तिर्ने अन्य विकल्प नहुँदा परीक्षार्थीहरु जाल्टनको कार्यालय भृकुटीमण्डप नै पुगेर घन्टौँ लाईन बसी शुल्क तिर्ने झन्झट गर्नु पथ्र्याे । यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै खल्तीले अनलाईन भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो । अब परीक्षार्थीले अनलाईन फर्म भरिसकेपछी शुल्क भुक्तानी गर्ने ठाउँ देख्नेछन्। जहाँ आफ्नो खल्ती आइडी दाखिला गरी केहि सेकेण्डमै शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
Previous नेपाल प्रहरीका ११ सय ७९ प्रहरी जवान हवल्दारमा बढुवा ! को का ? नामावली सुची सहित
Next मास्क महँगोमा बेचेमा वा लुकाएमा निशुल्क: ११३७ मा फोन गर्न सरकारको आग्रह !